डा. पुन को हो, कारबाही होइन, निकालिन्छ – स्वास्थ्य सचिव कोइराला – Everest Pati
काठमाडौं। एक साता अघि टेकु अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनलाई सरकारले स्पस्टिकरणका लागि पत्र का’टेको समचार बाहिरियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडा’इँमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका डाक्टरलाई स्पस्टिकरण सोधेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो। तर, शनिवार समचार बाहिरिएपछि आइतबार सरकारले डा. पुनलाई बोलाएर यो प्रकरण सामसुम पारेको थियो।
त्यसको एक साता पछि पुनः स्वास्थ्य सचिव यादव कोराइराला विवादमा तानिएका छन्। नेपाल आज नामक अनलाइनलाई दिएको अन्तरवार्तामा कोइरालाले डा. पुन माथि तँतँ ममको भाषा बोलेका छन्। सुरुमा तपाईबाट सुरु गरेका कोइरालाले अन्त्यमा डा. पुनलाई तँ भनेका छन्। यति मात्रै होइन घरमा बसेर कल्पना गरेर समचार लेखेको भन्दै मिडियालाई समेत गा’ली गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई समेत गा’ली गरेका छन्। उनले डा. पुनलाई स्पस्टिकरण सोध्ने होइन, सिधै जागिरबाट निकालिने बताएका छन्।
कोइरालाको भनाइ जस्ताको त्यस्तै
हाम्रा एक जना डाक्टर छन अरे ती पिएचडी मात्रै गरेका छन्। तर, तीनलाई पनि ल्याएर छलफल गरौं न त के रहेछ भनियो। विहिबारको दिन थियो। उहाँलाई बोलाउनु परो भनेर फोनमा सम्पर्क गरियो। तपाई आउनुहोस् छलफलमा भाग लिन परो भन्यौं। उहाँले फोन उठाउनुभएन। शुक्रबार फोन उठाउनुभयो चिठी भए आउँथे भन्नुभयो। चिठी दिन के आपत्ति? उहाँलाई सरकारले कहाँ सरुवा गर्नु छ, कहाँ गएर काम गर्नुपर्छ? सरकारले दिने अधिकार होइन? हामीले तपाई आउनुस् भनेर वेलकमका लागि चिठी लेखेका छौं। कारबाही गर्यो! यो मुलुक कहाँ लाँदैछौं हामी? के सरुवा? बोलाउन पाइँदैन कसैलाई? म काम गरिरहेको मान्छे धनगडी गएँ भने सरुवा हो मेरो? म विराटनगर गएँ भने त्यो मेरो सरुवा हो? के लेखेको त्यो? के बुझेर लेखेको ? लेख्ने अधिकार छ, त्यो नचाहिँदो कुरा? राज्य भड्काउने? स्वास्थ्यकर्मीलाई भड्काइदिने? नबुझिकन पछिपछि लाग्ने सबै? ट्वीटरे र फेसबुकेहरु जे नम लाग्यो त्यही लेख्दै हिँड्ने? कहाँ गएका छौं हामी? सत्य कुरा लेखौं न आउन यहाँ। हुँदै नभएको कुरा कल्पना गरेर लेख्ने? घरमा बसेर। के भको त्यो? तिमी आएर हेरिदेउ भन्दा एक घण्टा हेर्न सक्दैन उसले? उ को हो? कर्मचारी होइन? राज्यको पैसा खाएको होइन जनताको? उसले सेवा दिन पर्दैन? लेखेको के? तपाईले हुर्नु भएको त्यहाँ, कारबाही गर्यो।
कसले कारबाही गर्यो? एउटा करारमा बसेको मान्छेलाई मैले कारबाही गर्नुपर्छ? कारबाही त निकाल्ने हो। जम्मा २ वटा हुन्छ सम्झौता। करारमा बसेको मान्छेलाई की जागिर खान्छ, कि कारबाही गरेर निकाल्छ। हामीले स्पस्टिकरण सोध्दैनौं। याद गर्नुस् फेरी। निजामती सेवा पनि हेरौं, हाम्रो स्वास्थ्य सेवा पनि हेरौं। यहाँबाट पुष्टी हुन्छ, के लेखेको भनेर। कारबाही, के भनेको त्यो? स्पस्टिकरण सोध्यो के स्पस्किरण? त्यसलाई स्पस्टिकरण सोध्न मलाई आवश्यक पर्छ? जम्मा दुई वटा विकल्प हुन्छ, कि उसले जागिर खान्छ की निकालिन्छ। कुनै कानूनले स्पस्टिकरण सोध्दैन।
बहालवाला सचिव हो कि केजाति हो ज्यूको भाषा र करारमा रहेका कर्मचारीलाई गरिने तुच्छ ब्यवहार हैट !! शेर बादुर शेर हैन मुसै रैछन् !! त्यत्रो मिडियाबाजी गरिसकेसी यो मुख्य जिम्मेवारको मुखाॅं दुई लपेटा लाएर जागिर छोडिन्थ्यो होला ! pic.twitter.com/j4AyRCXo8H
— YANKEE (@Y_R_L15) April 25, 2020
मोरङमा बालिकालाई ब’ला’त्का’र गर्दै गर्दा बाहिरबाट श्रीमतीले चुक्कुल लगाइदिएपछि…